r / pornfree ၏အထင်ရှားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ် Porn
r / pornfree ၏အထင်ရှားဆုံးအကြိုးခံစားခှငျ့
ဒီ subreddit အပေါ်တိုင်းလူတစ်ဦး, r / pornfree အပေါ်တာသူ / သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုအတွက်စားသုံး ပတ်သက်. ခြံစည်းရိုးပေါ်ဖြစ်နိုင်သည်သူကိုသငျသညျမြားအဘို့, ငါ့ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအများအပြားအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆွဲဆောင်ကြကုန်အံ့။
အဘို့အ-fuck ဆိုတဲ့-အစဉ်အဆက်နောက်ဆုံး 1) တစ်ရှူးသေတ္တာများ။ ငါသည်အခြားရက်သတ္တပတ်တိုင်းကိုတစ်ကြိမ်ဖြတ်သန်းသွားခြင်းမပြုမီ၊ ဘာလို့မေးရတာလဲ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏နှာခေါင်းပေါ်တွင်သာမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်၏ dongle ၌ဖြစ်သည်။
2) သငျပိုကောင်းအသုံးပြုမှုအားလုံးကြောင်းဆီထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားခြောက်သွေ့လာသလား။ muchacho မပိုပြောပါ။ သင်၏အသားချောင်းပေါ်တွင်သင်ဖြုန်းတီးထားသောအရာမှန်သမျှကိုမှတ်မိသလား။ ယခုတွင်သင်သည်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုထည့်နိုင်သည်။ ကြမ်းတမ်းတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ပခုံးတွေကိုချောချောမွေ့အောင်လိမ်းဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းတမ်းသောကြွက်များကိုပျံ့နှံ့စေပြီးထိုခွေးပေါက်စများကိုလင်းစေနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင်ချစ်စရာကောင်းသည့်အမျိုးသမီး - သူငယ်ချင်းတစ် ဦး အပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ sexy ချောချောမွေ့မွေ့လိမ်းခြယ်ထားသောအသားအရေကိုတွေ့သောအခါသူမည်သို့ငြင်းဆန်နိုင်သနည်း။
3) အဘယ်သူမျှမကပိုအဆင်မပြေဒစ်ရေချိုးခန်းမှ struts ။ ငါပြောနေတာကိုမင်းသိတယ် သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာတွင်ထိုင်။ သင်၏ဘဝကိုအဝေးတစ်နေရာသို့လှည့ ်၍ ကြည့်ပြီးသင်တစ်ရှူးများပြတ်လပ်သွားသည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သာအဆုံးသတ်တော့သည် (အမှတ် ၁ ကိုကြည့်ပါ) ။ ဒါကြောင့်သင်ထ, သင့်ရဲ့တံတောင်ဆစ်နှင့်အတူသင်၏ရှပ်အင်္ကျီကိုတက်ကိုင်, သင်၏ခြောက်သွေ့သောလက်နှင့်သင်၏ခါးပတ် grited baloney မြင်းကိုသင်၏ခြောက်သွေ့သောလက်နှင့်အတူ, သင်၏အကြိုက်ဆုံးရှပ်အင်္ကျီမှသင်၏ခြောက်သွေ့တဲ့မဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့လက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစား, သင်သုတ်ရန်ရေချိုးခန်းသို့လမ်းကုန်းနှီး ရင်ခုန်စရာပင်ဂွင်းလိုအိမ်သာစက္ကူပေါ်မှာမင်းရဲ့ tallywhacker ။ သင်သာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါကရေချိုးခန်းသို့သွားစဉ်“ ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းရှိရမယ်” ​​ဟုသင်စဉ်းစားနေသည်။ ကောင်းပြီ၊ ခန့်မှန်းရမည့်အချက်များ၊ ဘီလီကံအားလျော်စွာမိခင်ကိုကျွန်ုပ်အားခေါ်ဆိုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်သင့်အတွက်အဖြေတစ်ခုရနိုင်ပါပြီ။ r / pornfree စိန်ခေါ်မှုကိုယူပြီးသင်၏ငိုက် waddle လုပ်နေဖမ်းသင့်ရဲ့အခန်းဖော် / mom, / ရည်းစားကိုစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလို! အဲဒါလွယ်ပါတယ်!
4) သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များထက်ပိုငျသညျခစျြလိမျ့မညျ။ ပြင်းထန်ပြီးနယ်စပ်ဒေသတွင်နာကျင်စေသော fapfest အလယ်တွင်ရှိနေခြင်းနှင့်သင့်ခွေး၊ ကြောင် / ချစ်သူရွှေငါး mosey ကိုသင့်ဆီသို့ ၀ င်ကြည့်လိုက်ပြီးသင့်မျက်လုံးထဲတွင်သေနေသည်ကိုကြည့်ခြင်းထက်ပိုမိုဆိုးရွားသလား။ ဒီတစ်ခါလည်း Lego ကိုခြေလှမ်းလှမ်းနေချင်နေမယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါ့အပြင်မင်းရဲ့စနေနေ့ညမှာ porn တစ်ခုတည်းကိုပဲတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ရတာဟာမင်းအတွက်ဖြစ်နိူင်ဆုံး shittiest အရာပဲ။ အဆိုပါ r / pornfree စိန်ခေါ်မှုကိုယူ။ သင်သည်သင်၏ခေါက်ဆွဲကနေသင့်ရဲ့ poodle ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မလိုအပ်! မင်းရဲ့ cockatoo ရဲ့အမျက်ဒေါသကိုမမြင်စေဖို့သင့်ရဲ့ cockatoo လှောင်အိမ်ထဲကိုစောင်တစ်ချောင်းမပစ်တော့ဘူး။ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ဒီ subreddit ကသင့်အားသေးငယ်သောတိရိစ္ဆာန်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင် Jane Goodall ကိုပြုလုပ်သည်။
5) အဘယ်သူမျှမကပိုရှက်စရာမုသာစကား။ သင့်ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီမှာအစက်အပြောက်အစက်အပြောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိမှသာဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့လေးစားမှုရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့လေးစားဖွယ်ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုကိုလမ်းလျှောက်ပါ။ ထို့နောက်သင်ညနေခင်းကိုလူတိုင်းကကြည့်နေသည်ဟုထင်ပြီးသင်မနက်စာအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယိုဖိတ်ခဲ့ရသည်ဟု“ ရည်” ဟုလူတို့အားပြောပြသည်။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းရှိတယ်၊ မင်းမရှိခဲ့ရင်မင်းမှာရှိနေတုန်းပဲ၊ ငါကိုယ်တိုင်လိမ်ပြောနေတာပဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီအခြေအနေတွေကိုနှုတ်ဆက်နိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာမင်းရဲ့အဝတ်တွေပေါ်ကအစွန်းအထင်းတွေကဒစ်ခ်ျစီးခတ်မယ့်အစားအချိုရည်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
6) ရေချိုးခန်းနေ့၌နည်းရှုပ်ထွေး။ သင်အကြိုက်ဆုံးရှပ်အင်္ကျီကိုကြည့်။ “ Donut glaze or jizz residue လား” ဟုပြောရန်မလိုတော့ပါ။ ရုရှားကစားတဲ့နေရာမှာညစ်ပတ်ပေရေတဲ့ခြေအိတ်နဲ့ကစားဖို့မလိုတော့ပါဘူး၊ သင်ကညစ်ညမ်းတဲ့လိင်ဖျော်ဖြေမှုပြီးတဲ့နောက်ညမှာတစ်ယောက်ကိုမဖြည့်ဘူးလို့ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ သန့်ရှင်းနေပုံရသောသန့်ရှင်းသောအတွင်းခံအဝတ်အစားတစ်စုံကိုသင်နောက်တဖန်မကြည့်ရှုနိုင်တော့ပါ။ ဒူးခေါင်းအထိဆွဲယူပြီးနောက်မအောင်မြင်သောညစ်ပတ်ဒစ်စကတ်အပြီးတွင်သင့်ဘောင်းဘီအတွင်းသို့သုတ်လိမ်းသည့်သုက်ပိုးရောင်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ဘောင်းဘီကိုဆင်းနေစဉ် 7) အဘယ်သူမျှမကပိုမတော်တဆသင့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအကြောင်းစဉ်းစား။ အလေးအနက်ထားပြောရရင်မင်းရဲ့တတိယခြေထောက်ကိုလေ့ကျင့်နေရင်းနဲ့အချစ်ဟောင်းအန်တီမီလီကိုစဉ်းစားသလိုမင်းရဲ့တစ်နေ့တာလုံးဘာမှမပျက်စီးစေပါဘူး။
8) နည်းပါးလာလား-သတိပေးချက်။ Porn စွဲ, စွဲလမ်း, အဘယျသို့သင်တို့ကိုငါဖြတ်သန်းခဲ့ကြငါသိ၏။ မင်းလမ်းပေါ်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီး“ ဟေး၊ သူကတော်တော်လေးလှတယ်၊ သူကသူမရဲ့လှပတဲ့အသွင်အပြင်အတွက်သာမကသူမရဲ့စရိုက်ကိုပါလေးစားပါတယ်” လို့စဉ်းစားနေမယ့်အစားသင်စဉ်းစားမိတယ်။ သူမသူမ၏ OFF OFF DONUTS! " အဲဒီလိုပဲ BAM! လက်ငင်း boner- သတိပေးချက်။ ယခုသင်သည်သင်၏ရှေ့မှောက်တစ်ခုခုကိုလှည့်ပတ်သွားလာရတော့မည်သို့မဟုတ် ၆၀ ဒီဂရီထောင့်ကိုတည့်တည့်လှည့်ပတ်သွားရမည်။ သို့မဟုတ်သင်ကြီးမားသောသူတစ် ဦး ၏နောက်ကွယ်တွင်လျှောက်လှမ်းရမည်။ သူတို့ကရုတ်တရက်ရပ်တန့်မသွားစေရန်သင့်အားမုန်းတီးနေသော Elvis နည်းနည်းဖြင့်နှိုးဆွပေးသည်။ ဒီစိန်ခေါ်ချက်ကိုယူပြီးအမျိုးသမီးတွေကို“ မင်းသောကြာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတုန်းမင်းမြင်ခဲ့တဲ့ညစ်ညမ်းကြယ်တစ်ပွင့်” နဲ့ဘယ်တော့မှမနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့၊ အဲဒီအစားသောနေရောင်သောသောကြာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာထွက်ပြီးမိန်းမတစ်ယောက်ကိုချက်ချင်းမရပ်ဘဲကြည့်လို့ရပါတယ် မင်းဘောင်းဘီမှာ
9) အထွေထွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးလာတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုပိုရှိတာ၊ လူတွေကိုမျက်စိထဲမှာကြည့်နိုင်စွမ်း၊ လက်ဝဲအမျိုးသမီးတွေရုတ်တရက်ဖြစ်လာတာနဲ့ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတာတွေလိုမင်းဘဝကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်အရာတွေပေါ့။ အန်တိုနီယိုဘင်နာဒါစ်သည် ED သို့မဟုတ်ခွန်အားမရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ သင်၏အထီးကျန်သောမြည်းကိုအိပ်ငိုက်နေစဉ်ညတိုင်းလူများနှင့်မိန်းကလေးများနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း၊ သင်၏ဘဝကိုသင်၏ရည်းစား / ရည်းစားသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းအပေါ်ရိုးသားမှုနှင့်သစ္စာရှိမှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ မိန်းမ၊ မိန်းမတွေကိုလူသားတွေအဖြစ်ရှုမြင်တာကအရာရာတိုင်းကိုအရှုံးပေးဖို့အရာဝတ္ထုတွေလိုမဟုတ်ဘဲ၊ သင် SAP နဲ့ OMM လိုမျိုးတော့နည်းနည်းမှမခံစားရတော့ဘူး။ ပြီးတော့သင်ကသင်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုရရှိနိုင်တဲ့တိမ်အနက်၊ အဓိပ္ပာယ်မဲ့၊ လိုအပ်ချက် porn, သင်လုပ်နိုင်သည်ကြောင်း ဘယ်တော့မှ အဲဒီလိုမလုပ်ဘဲနေပါ၊ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိင်ဟာဘဝကိုလှည့်ပတ်သွားစေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဆုံးတစ်ခုပါ။ သင်က porn ကြယ်ပွင့်ကိုကြည့်ပြီး“ မင်းဘာသိလဲ။ သူမသည် poops ။ သူမသည်ငါနှင့်မတူပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလိုက်လံစီးဆင်းမည့်မီးပြတိုက်မဖြစ်၊ သင်ဟာဘယ်တော့မှမဖမ်းနိုင်တဲ့ကားတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတဲ့ခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကားတွေဟာတကယ့်အစစ်အမှန်မဟုတ်ပေမယ့်အွန်လိုင်းပေါ်မှာ၊ တီဗွီမှာရောမဂ္ဂဇင်းတွေမှာပါမိန်းမတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ သင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ထောင်ချခံရသည်နှင့်အမျှသင်တည်ဆောက်ခဲ့သောဤအတွေးအခေါ်များသည်သင့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည် - သင်၏အမှန်တရားကိုသင်လိုချင်သောအရာမှဖယ်ရှားပါ။ သင်လိုချင်တာကသင်၏သူရဲကောင်းဘ ၀ ကိုဖြစ်နိုင်သမျှအားလုံးအတွက်အသက်ရှင်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင် porn ၏ခွေးဖြစ်ခြင်းကိုဖြုန်းတီးနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရန်မကြောက်လန့်သောတွင်းတူးကိုဖုံးထားရုံမျှမက၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းဟာငါ့ရဲ့မလုံခြုံမှုတွေအကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်ပြောတာကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘဝဟာလိမ်ညာမှုရဲ့ဟန်ဆောင်မှုအောက်မှာမနေခဲ့ဘူး။ ဘဝသည်ရုန်းကန်နေရခြင်း၊ နာကျင်မှုကြားမှ၊ ဘ ၀ သည်ရဲရင့်ခြင်း၊ မင်းနတ်ဆိုးများကိုကျော်လွှားရန်ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အသက်ရှင်သည်
မုသားမနေပါနဲ့ ဘ ၀ သည်ဤထက်များစွာသာလွန်သည်။